TC Stars oo ku guulaysatay koobkii Toddobaadka Soomaalida ee Minnesota
Tartankii cayaaraha toddobaadka Soomaalida ee sida xiisaha badan uga socday garoonka kubadda cagta ee James griffin Stadium ee gobolka Minnesota ayaa maalinimadii khamiista la soo gabagabeeyay, iyada oo ciyaartii kama dambaysta ee tartanka ay isaga hor yimaadeen labada kooxood ee kala ah.
TC Stars oo iyadu caan ka ah North America iyo kooxda dhallinta yare ee ku cusub garoomada oo lagu magacaabo Halgan.
Labadan kooxood ayaa muddadii tobanka casho ahayd oo tartanku uu socday, waxaa ay ku soo bandhigeen cayaaro aad looga maqsuuday.. Cayaartan oo ay ahayd kama dambaystii (Final) ayaa ku bilaabatay weerar iyo weerar celis aanan waxba la iskula harin,Waxaana u suurogashay qaybtii hore ee cayaarta in inamadi kooxda TC stars ay halkaasi ka dhaliyeen goolkoodii ugu horreeyay oo uu u xaqiijiyay ciyaaryahankoodii u sitay lambarka 80 aad waa Nuuraddiin . Qaybtii 2aad ee cayaarta ayaa kooxda Halgan weerar xoogan oo ay qaadeen waxaa u suuro gashay in ay gool helaan kadib markii difaaca kooxda TC laad uu is lahaa bannaanka u saar uu goolkiisa ku hubsaday.. Ciyaartiina waxaa ay noqotay 1 iyo 1 .
Taageerayaasha kooxda Halgan oo iyagu soo buux dhaafiyay garoonka ayaa qaylo iyo sawaxan dheer ku taageerayay kooxdooda oo ay ahayd markii ugu horraysay oo tartankan Somali Week ay ka soo qaybgalaan, kooxo caan ahaana soo dubtay, waxaana dad badani ay saadaalinayeen in cayaarta la isla tagi doono tuurashada xorta ah, hase yeeshee kooxda TC Stars oo iyadu ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan North America, ayna u cayaaraan cayaartooy aad u farsamo wanaagsan ayaa kubad aad loo farsameeyay oo isu dhiib gaagaaban ahaa la yimid goolka afkiisa, waxaana u suuro gashay inay halkaasi ku dhaliyaan goolkoodii guusha oo uu u saxiixay ciyaaryahan sheikh Cumar oo numbarka 9aad u watay kooxda TC. Ciyaartiina waxaa ay ku soo gabagabowday 2 gool kooxda TC Stars iyo 1 Gool Kooxda Halgan.
Ciyaartan ka hor waxaa la cayaaray cayaartii dhallinta Cuslaatay oo ay ciyaarayeen rag iyagu maamuus ku lahaa K/cagta Soomaaliya kuwaasi oo ku cayaarayay magacyada Kismaayo iyo Banaadir, waxaana ay isla dhaafi waayeen 1 gool iyo 1 gool.
Waxaa iyaduna Xusid mudan in in halkaasi lagu soo bandhigay cayaaraha xarigjiidka iyo orodada oo ay ka qaybqaadanayeen caruur da’doodu u dhaxaysay 8 ilaa 14 sano.
Munaasabadii xiritaanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf ka kala timid Toronto,Chicago,Atlanta,odayaasha isboortiga ee gobolka Minnesota, Siyaasiyiin,dadkii maalgaliyay tartankan, fannaaniinta gobolka MN, warfidiyeeno ka kala socday idaacadaha Somali TV of MN, Somali National TV(SNTV), Universal TV iyo qorayaal ka socday websiteyada.
Guddoomiyaha Isboortiga ee gobolka Minnesota oo isagu soo xiray tartanka ayaa u mahadceliyay dadkii soo abaabulay tartankan qiimaha badnaa iyo kooxihii ka soo qaybgalay intaba iyo dadkii idaacadaha ka tabinayay intuba, waxaana uu ka hadlay faa’iidada isboortiga iyo ujeedooyinka fog ee laga leeyahay qabashada tartamada noocan oo kale ah.
Waxaana uu hadalkiisa ku soo xiray hambalyo uu u jeeiyay labada kooxood ee TC Stars oo ah horyaalka sannadkan 2013 iyo Kooxda Halgan oo iyadu gashay kaalinta 2aad.
Sidan ayaa abaalmarinadii loo kala helay
TC Stars Kaalinta 1aad
Halgan Kaalinta 2aad
Kooxda Halgan ayaa loo aqoonsaday kooxdii ugu wanaagsanayd
Leader ship Award -Liibaan Yare oo ka socday kooxda TX Tigers
Best Goalie Axmed oo ahaa goolhayihii kooxda Halgan
Top Scorer Nuuraddiin oo ka socday kooxda TC Stars 8 gool